qarin xR Wadayaasha Alok's Dynamic 'Alive' Muusikada Gaarka ah ee Live looga Baahan yahay Brazil | NAB Show News | 2020 NAB Show Iskaashatada Warbaahinta iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Warka Injineeriyada ee Warbaahinta
Bogga ugu weyn » Featured » qarin xR Wadayaasha Alok's Dynamic 'Alive' Muusigga Gaarka ah ee Liveka looga dhex Baahiyo Brazil
Bandhigii ugu weynaa ee reer Baraasiil ee DJ si toos ah looga daawado 2020 wuxuu ka dhacay xR, maaddaama DJ-ga maxalliga ah iyo muusikiiste Alok ay soo jiiteen 750,000 oo qof 'Nolol' durdur toos ah bishii Diseembar, sidoo kale waxay xireysaa toddobo milyan oo muuqaal ah YouTube. Isqarxinta xR ee shaqadu waxay kexeeysay muusigga qaaska ah ee leh vx 4 server server iyo laba dhufto oo rx ah oo u oggolaanaya bandhigga inay ku daraan waxyaabaha ka soo baxa hoggaamiyeyaasha matoorrada aan runta ahayn, Midnimada iyo Nolosha.
Alok waa mid ka mid ah astaamaha ugu caansan masraxa miyuusigga elektarooniga ah ee reer Brazil. Waxaa ku magacaabay Forbes Brasil oo ah mid kamid ah dadka ugu saameynta badan 30 sano jir wadanka. Ka dib markii la joojiyay dhamaan barnaamijyadiisii ​​live sanadkii hore, ujeedka xR live stream wuxuu ahaa in la keeno qaab cusub oo lagu faafiyo waxqabadka fanaanka faankiisa weyn.
Agaasimaha Mashruuca Fabio Soares oo ka socda OkeStudio oo ay weheliso TheForce waxay casuuntay shirkadda Sao Paulo ee fadhigeedu yahay, adeegga buuxa ee AV Maxi si loo bixiyo qulqulka shaqada ee xR ee bandhigga, oo ay weheliso khabiir ku takhasusay socodka shaqada Tito Sabatini oo ku saabsan taageerada farsamada. Alok gaar ah ayaa lagu dhex milmay jawi firfircoon, waligiisna isbedelaya oo muujinaya kaymo midabo badan leh oo ah boqoshaada la farsameeyay iyo geedaha, durdurrada walxaha galactic, iskuduwaha, qulqulaya qashinka barafka, magaalooyin dhisa oo kala daga.
Taageerada dharka qarsoon “waxay ahayd wax aanan noolaan karin la’aantood,” Jose Augusto Martins, Agaasimaha Fulinta ee Maxi, ayaa soo wariyay. Mashruuc weyn oo sidan oo kale ah iyo dhammaan shaqaalaha farsamada fiidiyowga ee baranaya sida loo isticmaalo xR, taageerada muuqaalka ayaa fure u ahayd. Waxay na siisay kalsooni ah inaan si sax ah wax u wadno. Waxaan dooneynay dadku inay dareemaan tamarta riwaayad dhab ah waana lagu guuleystay.
"'Alive' wuxuu ahaa mashruuc weyn oo xR ah, waxaana ka qabanay markii ugu horeysay Brazil, sidaa darteed wax badan ayaan ka baranay intii aan ku guda jirnay howsha hirgelinta mashruuca," Jose ayaa intaas raaciyay.
Maxi wuxuu ahaa shirkadda kaliya ee kireysiga ee leh aaladda qalabaynta si loo soo saaro wax soo saarka xR, ayuu yidhi. Maaddaama qoraalka kooban ee farsamada loo baahan yahay in la isticmaalo dhammaan saddexda matoor ee bixiya muhiimka ah ee kala ah Unreal, Unity iyo Notch, oo lagu daray kaamirooyin fara badan oo lagu beddelayo afar kamaradood oo dabagal ah iyadoo la adeegsanayo nidaamka raadraaca ee Estabili, isqarintu waxay ahayd aaladda kaliya ee awood u leh gudbinta qoraalka, ayuu yiri Tito. "Waxay bixineysaa agnostic waxayna xamili kartaa kamarado badan oo beddelaya, lambarka waqtiga ka dambeeya tilmaamaha DJ iyo waxyaabo kale oo badan."
Kooxda ka socota Maxi waxaa la soo dersay waqti xaddidan oo ay ku baranayaan dhuumaha dhammaan saddexda matoor abaalgud iyo dejinta raadinta afar kamaradood, iyagoo sidoo kale ka caawinaya qof walba oo ku lug leh inuu fahmo qulqulka shaqada ee xR iyo sida ay suurtogal u tahay wax soo saar macquul ah.
"Tani waxay ahayd wax soo saar aad u weyn, oo u heellanaanshaha qof kasta oo ku lug lahaa ayaa taasi dhacday," ayuu yidhi Tito. “Bandhigga ka dib, Alok maareeyihiisii ​​iyo shaqaalihiisiiba waxay ahaayeen kuwo shucuur badan, nafisna leh oo faraxsan. Jawaab celinta dadweynuhu waxay ahayd mid la yaab leh sidoo kale; dad ka socda warshadaha dalka Brazil ayaa noo yimid si ay noo soo hambalyeeyaan, taasina waxay ahayd dareen wanaagsan oo aan lahaan lahaa ka dib sanad sidan u xun oo ay ku jirtay warshadaha muusikada. ”
Jose wuxuu rumeysan yahay in xR uu mustaqbal ifaya ku leeyahay suuqa muusikada tooska ah, isagoo u keenaya soo-saareyaal iyo farshaxanno deegaan kasta oo suuragal ah in la qiyaaso. "Waxaan u maleynayaa in tani ay tahay tiknoolajiyad ka dhigeysa qof walba inuu yiraahdo, Wow! '" Maxi wuxuu horey u calaamadeeyay xR gig kale kalandarka maaddaama uu riwaayad Criolo live ka sii daayay riwaayad gaar ah oo lagu dheereeyay Xaqiiqada la dheereeyay 23 Janaayo.
Agaasimaha Hal abuurka: Fabio Soares
Soosaaraha Fulinta: Fernanda Padrão
fikradda xR: OkeStudio iyo TheForce
xR Agaasimaha Hal abuurka: Luciano Ferrarezi
xR Maamulaha Mawduuca: Dejumatos
xR Agaasimayaasha farsamada: Tito Sabatini iyo Gabriel Weckmuller
Barxadda teknolojiyadda isqarxinta waxay awood u siineysaa xirfadlayaal hal abuur iyo farsamo inay qiyaasaan, abuuraan oo gaarsiiyaan khibrado muuqaal ah oo toos ah oo heer sare ah.
Isugeynta waqtiga-dhabta ah software-ka 3D-muuqaalka-ku-saleysan oo leh qalab wax-qabad sare leh, isqarinku wuxuu bixiyaa mashruucyo hal abuur leh oo baaxad leh iyo kalsooni. Abaal-marinteeda cusub ee abaalmarinta ku-meel-gaadhka ah ee loo yaqaan 'Extended Reality' (xR) waxay awood u siinaysaa dadka isticmaala inay u soo bandhigaan nolol waaya-aragnimo muuqaal ah oo dhiirrigeliya oo ay ku mashquuliyaan dhagaystayaasha fog meel walba.
Isqarxinta xR waxay durba awood u siisay soo-saarista waqtiga dhabta ah ee farshaxan-yahannada muusikada sida Katy Perry iyo Billie Eilish, ganacsiyada ganacsiga sida SAP iyo Lenovo, xarumaha waxbarashada sida Jaamacadda Michigan, baahinta barnaamijyada TV-ga sida MTV Video Music Awards iyo America's Ta Talent, ganacsi noocyada sida Nike iyo Under Armor iyo khibrado kale oo fara badan oo ka badan 30 dal.
Iyada oo leh shabakad wadaag wadaag ah oo caalami ah oo sii kordheysa isla markaana kaashaneysa naqshadayaasha muuqaalka ugu kartida badan adduunka iyo kooxaha farsamada ee dhacdooyinka tooska ah, baahinta TV-yada, filimada, dalxiiska riwaayadaha, tiyaatarka, rakibaadda go'an iyo munaasabadaha shirkadaha iyo madadaalada, ayaa la qarinayaa iyadoo la dhisayo jiilka xiga ee iskaashiga. qalab ka caawiya farshaxan-yahannada iyo tikniyoolajiyadda inay xaqiijiyaan aragtidooda.
Previous: Neve® 8424 Console wuxuu keenayaa dabacsanaan lagu daray socodka socodka Mike Smith
Next: Crew ee Sanduuqa wuxuu Isticmaalaa Kaamirada Pocket Camera 6K iyo ATEM Mini Pro ee MTV Movie & TV Awards: Ugu Weyn Waqtiga oo dhan